CoC ကိုပါ Hack နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ XMODGAMES v1.2.1 : Universal Android Game Hacker - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Hack Tools Phone Application CoC ကိုပါ Hack နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ XMODGAMES v1.2.1 : Universal Android Game Hacker
CoC ကိုပါ Hack နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ XMODGAMES v1.2.1 : Universal Android Game Hacker
Maung Pauk at 11:13:00 PM Android Application, Hack Tools, Phone Application,
XMODGAMES v1.2.1 : 5.37 Mb
XMODGAMES ဆိုတာကတော့ Android Game တွေကို Hack နိုင်တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. Game တွေထဲမှာ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ Feature တွေကို Hack နိုင်ပါတယ်တဲ့.. သူ့ Feature ထဲမှာတော့ CoC ( Clash of Clans ) ကိုပါ Hack နိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်.. ဘယ်လို Hack ရတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိသေးပါဘူး.. စာရင်းရတော့ Game ပေါင်း ၃၉ မျိုးတောင် Hack လို့ရတယ် ဆိုပဲ.. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ XMODGAMES v1.2.1 နောက်ဆုံးထွက် Android 5.0 Lollipop တွေကိုတောင် Support ပေးတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်.. ဒီ App ကိုသုံးဖို့အတွက်တော့ Root Access ရှိရပါမယ်..
[ XMODGAMES ဆိုတာကတော့ Android Game တှကေို Hack နိုငျတဲ့ Tool တဈခုဖွဈပါတယျ.. Game တှထေဲမှာ ပိုကျဆံပေးဝယျရတဲ့ Feature တှကေို Hack နိုငျပါတယျတဲ့.. သူ့ Feature ထဲမှာတော့ CoC ( Clash of Clans ) ကိုပါ Hack နိုငျတယျလို့ ရေးထားပါတယျ.. ဘယျလို Hack ရတယျဆိုတာတော့ ကြှနျတျောလညျး မသိသေးပါဘူး.. စာရငျးရတော့ Game ပေါငျး ၃၉ မြိုးတောငျ Hack လို့ရတယျ ဆိုပဲ.. ခုတငျပေးလိုကျတဲ့ XMODGAMES v1.2.1 နောကျဆုံးထှကျ Android 5.0 Lollipop တှကေိုတောငျ Support ပေးတယျလို့ ရေးထားပါတယျ.. ဒီ App ကိုသုံးဖို့အတှကျတော့ Root Access ရှိရပါမယျ.. ]
What’s new in update 1.2.1
Compatible with Operating System Android 5.0
A floating window for controlling Mods and Accelerator, rendering better user experience
For Android 5.0, XMG v1.2.1 currently supports 8 popular latest mods and MORE to come!
Note : Please install the 1.2.1 version and update the mod to the latest version. Only in this situation can the mods work on android lollipop
Home Page : http://www.xmodgames.com/
dove knc May 11, 2015 at 9:45 AM
coc version အသစ်မှာ အဆင်မပြေပါဘူး လို့ :(